Mmetụta Radius: Onye Mmekọ, Mgbakwunye, Mgbasa Ozi na Njikwa Mkpado | Martech Zone
Mmetụta Radius na-enyere ụdị dijitalụ na ụlọ ọrụ aka ime ka nloghachi nke ad nọrọ gafee ọwa dijitalụ, ekwentị mkpanaaka na nke anọghị n'ịntanetị. Teknụzụ SaaS ha na-enyere ndị ahịa aka inwe otu nchịkọta lelee mgbalị niile ị na-eme n'ịzụ ahịa site na ịnakọta data njem ndị ahịa granular na ahịa ahịa.
Suite Mmetụta Suite nke Ngwaahịa gụnyere
Onye Mmekọ - machiini gị Mgbakwunye na usoro ibe mmemme. Belata ụgwọ azụmahịa gị ma bulie ROI ka ị na - eme ka scalability, nghọta nyocha, na njikwa.
Onye njikwa Tag - njikwa mkpado gafee ọwa niile - gụnyere ekwentị.
Onye mgbasa ozi - ebe etiti data maka ime ka ịkọwapụta ọtụtụ ọwa kọwaa ma nweta nghọta banyere uru nke isi mmalite nyere, ma tụọ ya n'ụzọ ziri ezi laghachi na mgbasa ozi (ROAS).
Ekwentị mkpanaka mkpanaka - Gwakọta otu SDK ma lelee ngwa ekwentị niile na ngwa ngwa sitere na ndị mmekọ niile.
Inbound Oku Tracker - Sochie niile inbound oku ọrụ dị ka clicks, na otu n'elu ikpo okwu. Mechie akpa ọrụ, gụnyere nkwekọrịta na ịkwụ ụgwọ ndị mmekọ.
Ahịa - chọta ma jikọọ ndị nkwusa na ndị mmekọ site na nchọta algorithm nke Impact Radius.
Site na akpaaka nke usoro mgbasa ozi dị oke mkpa na nnyefe oge nke nghọta akuko na-ahụ anya, Mmetụta Radius na-enweta ego maka ụlọ ọrụ ụwa dịka American Airlines, Cabela's, Shutterstock, Tommy Hilfiger na Wayfair.
Tags: Njikọ mmekọMgbakwunye ahịa n'elu ikpo okwuMgbakwunye n'elu ikpo okwuụlọ ọrụ na-ere ahịa ahịaụlọ ọrụ nyiweahia ọwammetụta radiusinbound oku Trackernjikwa mgbasa oziekwentị mkpanaaka trackernjikwa ndị mmekọonye njikwa ibelaghachi na mgbasa oziiberibesaasnjikwa mkpadonjikwa njikwa
Postano 2.5: Na-agbakwụnye ihe okike na Nhazi maka Ngosiputa Ngosiputa Social
Sep 20, 2016 na 11:40 PM
Atụkwasịla obi na mgbakwunye ahịa azụmaahịa a. Agwara m onye nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ ịzụta atụmatụ na MaxCDN ma nweta ọrụ nke akwụ ụgwọ na ọnwa 3. Emechara m niile achọrọ ụdị site MaxCDN si Mgbakwunye ahịa n'elu ikpo okwu Impact radieshon 3 ọnwa tupu ugwo bụ n'ihi. Eji m ego m na-akpata na-akwụ ụgwọ ihe m na-akwụ. Mgbe ọnwa atọ gachara ịkwụ ụgwọ ahụ, ndị otu na - echekwa ego ha welitere okwu maka na m na-adaghasị ọnụ ọgụgụ m abaghị uru. Gini kpatara nsogbu a na adighi ekwuwa okwu ọnwa ato gara aga ebe enwere ike igbochi igbu oge? Gịnị kpatara okwu a mgbe m tụrụ anya na ego m rụtara ga-eji kwụọ ụgwọ m? Nke a doro anya na ọ bụ ntụpọ / nleghara anya na akụkụ nke Mmetụta Radius. Enwere m mkparịta ụka izu 3 na nkwado ndị ahịa ha, tụụrụ ha aro ka ha jiri ụzọ dị iche iche mara maka ịrụ ọrụ maka akaụntụ m wee ruo ebe m kpọtụrụ ndị isi nke Impact Radius na enwetaghị azịza n'aka ha. Akpọkwara m kọntaktị ozugbo na MaxCDN na isi ha iji rịọ maka enyemaka ha ka m gwụchara nhọrọ niile m nwere na Radius Impact, atụkwaghị m ntụkwasị obi na ha ma mesoo ha naanị na-enye m nsogbu. Enwetaghị enyemaka MaxCDN. N’ime mgbalị niile a, m na-egbu oge, na-enyekwa m nsogbu nke ukwuu. Enwere m ego n'ihi ntaramahụhụ na ịkwụ ụgwọ ụgwọ n'oge. Emehiere m bụ na m tụkwasịrị ha obi na ha ga-akwụ ụgwọ.
Sep 20, 2016 na 11:44 PM
Ọ dị ka a ga - asị na ha nwere ike iji nyocha nyocha na usoro ha, mana echeghị m na m ga-agarịrị na ịsị na ha enweghị ntụkwasị obi mgbe ị banyere ozi ntụgharị na-ezighi ezi. Anyị na ha arụkọala ma hụbeghị otu okwu.